Galmudug oo amartay in lasoo xiro maleeshiyada
Tuulada Xirsi Lugey oo ka tirsan degmada Balanbal ayay galabta koox hubaysan ku xasuuqeen, waxaana la sheegay in weerarka lagu laayay dadkan rayidka ah uu salka ku hayey dilal beeleedyo horay uga dhacay gobolka Galguduud.
Magacyada shanta qof ee la dilay ayaa kala ah: Gaarane Cawil Samater, Cabdi Xirsi Carab Kaahiye, Cabdi Yare Maxamed ow Faarax, Cadaawe Xirsi Lugey & Ibnu Cali Dheere Xirsi Cawaale.
Bayaanka DG madaxweyne ku xigeenka, wasiirka warfaafinta arimaha gudaha & tacsiyeenka kadib waxay si wada jir ah u cadeeyeen in laamaha amaanka ay ku lug leeyihiin soo qabashada maleeshiyada la toogtay.
“AUN dadku wuu dhintey, dhacdadu waxay la xiriirtaa dilalkii habeenimadii Talaadada bulshada, waxaa fuliyay aqoonyahanno meel aan hubaysnayn, 5 qof ayaa ladilay, waxaana suuragal ah qasaaraha intaas ka badan in ay jiraan dad u cararay keymaha” Ciidamada amaanka ayaa shaqeynaya si ay u soo qabtaan mintidiinta. “ Sidaas waxaa yiri wasiir Falagle.
Gobolka Galguduud ayaa dhawaanahan waxaa ka dhacayay dilal loo geysanayay dad rayid ah oo aan hubeysneyn. 9-kii Diseembar 2020, saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa la khaarijiyay waxaana la qabtay shaqsiyaad looga shakiyay inay ka dambeeyeen weerarka.
Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya oo ay dileen Aano qabiil gobolka Galgaduud.
Galmudug waxay cambaareyneysaa weerarkii lagu qaaday saraakiisha ciidamada Qaranka Soomaaliyeed
“Saraakiisha lagu dilay Galguduud laguma eedeyn karo beel ka mid ah, laakiin waa fal argagixiso” ayuu yiri Taliye Odowaa.
Waa kuma “Ronaldo-ha cusub” maanta?